Manager | Myanmar V-Pile Co.,Ltd. ﻿
•	Pre-cast ထုတ်လုပ်ရေးပိုင်းကို ကောင်းစွာနားလည်တက်ကျွမ်းရမည်။
•	မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ နွယ်ခွေရှိ Pre-cast စက်ရုံတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။
•	BE (Civil) ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။
•	Pre-Cast Concrete လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။
•	အသက် (၃၀) နှစ်နှင့် (၅၀) ကြားဖြစ်ရမည်။
•	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၃) နှစ်ရှိရမည်။
Manager Admin,Secretaial & PA jobs Joblessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon Myanmar V-Pile Co.,Ltd. Admin, Secretarial & PA jobs Admin, Secretarial & PA jobs Manager Jobs in Myanmar, jobs in Yangon